बागमती प्रदेशः कार्यकाल ४ वर्ष, कर्मचारी र भौतिक संरचनाको निकै अभाव
वि.सं २०७८ माघ ०८ शनिबार
राजनीति / प्रदेश / सरकार / वाग्मती प्रदेश
२०७८ पुष ०४ आइतबार
खबरमुकाम । बागमती प्रदेश सरकारले दलीय भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय विभाजन गर्दा कर्मचारी र भौतिक संरचनाको निकै अभाव देखिएको छ । प्रदेश सरकारले पूर्व तयारी र छलफल बिनै दलीय भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय विभाजन गरी संख्या बढाएपछि प्रदेश सरकारको काम कारवाही नै अस्तव्यस्त बनेको बताईएको छ ।
आगामी माघ २९ गते बागमती प्रदेश सरकारल आफ्नो ४ वर्ष पूरा हुने समयको पुर्वसन्ध्यमा रहेको छ । अहिलेसम्म प्रदेशले ३ जना मुख्यमन्त्री ,३ दर्जनभन्दा बढी प्रदेश सांसद त मन्त्री नै पाईसकेको अवस्था छ । तर प्रदेस फगत दलीय भागबण्डा मिलाउनमा सिमित रहेको छ ।
सरकारले आफ्नो स्थायी संरचना निर्माण गर्न सकेको छैन । प्रदेश संरचनाको विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मात्र सीमित बनेको छ । बजेट विनियोजन गरिए पनि कार्यान्वयन तह निकै फितलो देखिएको छ । प्रदेश सरकारले हालसम्म पनि मन्त्रालय र सम्बन्धित कार्यालयका लागि भवन व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।
शेरबहादुरले गलत बोल्दा राजीनामा दिनु पर्ने, रेणुले नपर्ने ? यो कस्तो व्यवस्था हो सरकार !
सुनसरीका श्रीमतीको हत्या गरेको अभियोगमा पक्राउ
स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न यस्ता छन् संविधानविद् भीमार्जुनले सुल्झाएका दुई बाटाहरु
करणी गरेको अभियोगमा १ युवक पक्राउ
देशभर थप १० हजार २५४ जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण, १६ जनाको मृत्यु
मन्त्री यादवको अभिव्यक्ति सामाजिक र कानुनी रूपमा अपराध हो– प्रदीप पौडेल
‘विदेशी एजेण्डा बोक्ने बाबुराम भट्टराई उफ्रेर एमालेको केही हल्लिँदैन’– गोकुल बाँस्कोटा
निर्वाचनबारे यसो भन्छन् संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य...
बाबुरामजी रोल्पाको हारजंगमा ८ जना नागरिकलाई घरभित्र थुनेर जिउँदै जलाएको बिर्सनुभयो ?– बास्कोटा
पूर्वप्रधानन्याधीश मोहन शर्माको सम्झनामा भोली देशभरका अदालत बन्द